I-India ibhibize amaProteas iziphindiselela emdlalweni wesibili - Impempe
I-India ibhibize amaProteas iziphindiselela emdlalweni wesibili
March 9, 2021 Impempe.com
UJhulan Goswami we-India uthathe amawikhethi amane bebhekene namaProteas
I-India iziphindiselele kabuhlungu kwiNingizimu Afrika ngesikhathi iyishaya ngamawikhethi ayisishiyagalolunye emdlalweni wosuku olulodwa wesibili e-Ekana International Cricket Stadium, eLucknow, e-India, ngoLwesibili.
Emdlalweni wokuqala kuwine amaProteas ngamawikhethi ayishiyagalombili ngeSonto, nokuyinto ebukeka sengathi iyicanulile i-India. NgoLwesibili iNingizimu Afrika ibhethe kuqala yenza ama-run angu-157 kuphela, yakhishwa yonke nge-over ka-41. Bekubhoke uJhulam Goswani othathe amawikhethi amane wanganelwa ama-run angu-42.
Lo mdlali ongunombolo 1 emhlabeni ubewamise kabi amaProteas kunzima nokubeka ama-run ebhodini ngokukhululeka. Abanye abashwibe kahle kwi-India uJoshi Mansi othathe amawikhethi amabili kwathi uRajeshwari wathatha amawikhethi amathathu. Abadlali ababhethayo beNingizimu Afrika abenzanga kahle neze. Umdlali owenze ama-run angcono uLara Goodall ophume esehlanganise angu-49.
Iphendula i-India iqale kahle yize kuwe iwikhethi isenze ama-run angu-27. Nokho ngemuva kwalokho ilishaye badideka bonke abadlali abashwibayo bamaProteas. Bekubhoke kakhulu uMandhana ophume esenze ama-run angu-80 noRaut oqede esenze ama-run angu-60. Laba bobabili bashaye ama-run okuyiwona enzele phansi iNingizimu Afrika, aqinisekisa nokuthi i-India iyawina.
Ukuwina kwe-India kuchaza ukuthi emidlalweni yosuku olulodwa emihlanu sezibambene ngo 1-1. Umdlalo wesithathu uzobuka ngoLwesine ekuseni enkundleni efanayo. Iqembu elizowina lapho lizozibeka ethubeni elikahle lokuhamba nochungechunge lwemidlalo yosuku olulodwa. Akwaziwa noma amaProteas azolishintsha yini iqembu njengoba eya emdlalweni wesithathu nongase ucacise ukuthi yiliphi iqembu elikhala lemuke nendebe.
Previous Previous post: Ngabe uMotsepe upopola ingozi ngokungafuni kubhiyozwe manje?
Next Next post: Ungene emabhukwini omlando uMashiane eshayela iChiefs igoli kwiCAF